राजु श्रेष्ठले रक्षा श्रेष्ठलाई किन “सक्की गो नि त भने ?(भिडियो सहित) - Enepalese.com
राजु श्रेष्ठले रक्षा श्रेष्ठलाई किन “सक्की गो नि त भने ?(भिडियो सहित)
इनेप्लिज २०७४ चैत १६ गते ११:१७ मा प्रकाशित
काठमाडौं । मोडल तथा नायक राजु श्रेष्ठले मोडल रक्षा श्रेष्ठलाई सक्कि गो नि त भनेका छन् । गायक रमेश कुमार श्रेष्ठको स्वरमा रहेको नयाँ आधुनिक गीतको बोल नै त्यस्तो भएपछि राजुले रक्षालाई त्यसो भनेका हुन् । कृष्ण कुमार रार्इको शब्द तथा संगीतमा तयार पारिएको उक्त गीतको भिडियो समेत सार्वजनिक गरिएको छ ।
केही चलचित्रका साथै म्युजिक भिडियोमा समेत व्यस्तता बढाएका राजु श्रेष्ठको साथमा रक्षा र बिवेक सिवाकोटीले पनि अभिनय गरेको सक्कि गो नि बोलको यो गीत हाल चर्चामा छ । गीतको भिडियोलाई निश्चल के.सी.को निर्देशनमा मुकेश हुमागाईंले खिचेका हुन् भने सम्पादन अमृत चापागाईंले सम्पादन गरेको छन् ।
मालती डिजिटल प्रा.लि.को प्रस्तुति रहेको गीतको भिडियो म्युजिक नेपालले सार्वजनिक गरेको हो ।